Zavatra 3 tokony horaisinao eny na eny amin'ny dia | Travel tanteraka
Fitsangatsanganana tanteraka | 13/12/2021 11:59 | Nohavaozina amin'ny 15/12/2021 12:04 | ny hafa
Ankehitriny dia toa miadana ny toe-draharaha nateraky ny fahatongavan'ny valan'aretina miverina amin'ny laoninyMaro amintsika no manomana ny tenantsika, amin'ny fialan-tsasatra manaraka, hanao dia iray izay ahafahantsika miala amin'ny adin-tsaina sy ny tebiteby. Mba hanaovana izany, dia tsy maintsy manomana tsara ny lalan'ny fizahan-tany harahina izay hiantohana ny fandalovanay amin'ny toerana sy toerana fizahan-tany ny toerana halehantsika.
1 Zavatra 3 tokony ho entinao ao anaty valizy
1.1 Omano tsara ny akanjo izay hataonao
1.2 Aza adino ny fitaovana elektronika
1.3 Miantoka ny fahadiovanao amin'ny vokatra ara-pahasalamana
Zavatra 3 tokony ho entinao ao anaty valizy
Ny lafiny iray hafa tokony hodinihina dia ny zavatra tsy maintsy entinay amin’ny dianay. Betsaka ny fanomanana ka imbetsaka no vitantsika reraka ny ary famonosana diso ary amin'ny minitra farany. Mba hialana amin'ity karazana toe-javatra ity dia hotanisainay eto ambany ianao ny zavatra 3 tokony ho entinao mandehandeha.
Omano tsara ny akanjo izay hataonao
Na dia miharihary aza izany, dia tsy maintsy manana izany isika Ny akanjo mety mba handeha araka izay azo atao ho any amin'ny toerana fizahan-tany. Ankoatra ny atin'akanjo hotafintsika dia tsy maintsy mampifanaraka ny safidintsika amin'ny toetrandro ho hitantsika any isika: raha miandry ianao maripana ambany, manomana fonon-tanana, satroka, saron-tava ary sweatshirt; ny mifanohitra amin'izany, raha miandry ianao tena mafana mandritra ny dianao, mitadiava ny tenanao kilaoty, lobaka sy t-shirt misy tanany. Raha misy tora-pasika akaiky dia aza adino ny akanjonao!
Mba hanamorana ny fisafidianana akanjo ho entina ao anaty valizy dia manoro hevitra anao izahay hisafidy akanjo napetraka izay azonao ampiasaina sy miovaova mandritra ny andro ijanonanao. Raha toa ka lava kokoa ny fijanonana dia mandehana tsara miaraka amin'ny T-shirt, pataloha ary kiraro isan-karazany.
Aza adino ny fitaovana elektronika
Fandrosoana ara-teknolojia izay nipoitra tato anatin'ny taona vitsivitsy dia niteraka fitaovana elektronika tena ilaina. Mandalo ny finday avo lenta ary amin'ny charger azy dia tsy maintsy ataontsika antoka fa mitondra fakan-tsary, solosaina findainy ary bateria ivelany entina hamerenana ny fitaovantsika isika raha lany ny bateria.
Rehefa mitondra ireo fitaovana ireo dia tena ilaina izany fonosina araka izay azo atao mba tsy ho simba mandritra ny fitaterana. Mba hanaovana izany, andramo ny mitondra azy ireo ao anaty kitapo entinao na ao anaty kitapo mitokana mba hiantohana ny fiarovana azy. Raha toa ianao ka mahatsiaro ho voatery hitondra azy ao anaty valizy fitahirizanao, dia ataovy izay hampidirana azy ireo ny faritra afovoan'ny entana.
Miantoka ny fahadiovanao amin'ny vokatra ara-pahasalamana
Azo inoana fa rehefa tonga any amin'ny toerana fizahan-tany misy anao ianao dia hijanona ao anaty a trano fandraisam-bahiny izay manolotra ny mpanjifa ny karazana rehetra fitaovana fanadiovana. Na izany aza, raha toa ka tsy fantatrao tsara hoe inona ireo fitaovana izay hampidirin'ny trano fandraisam-bahiny, na raha fantatrao fa misy fototra tsy hita, dia tsy maintsy maka Kitapo makiazy miaraka amin'ny entana mifandraika amin'izany: borosy nify, déodorant, moisturizer, famafazana, savony ... sy ny sisa.
Satria izy ireo dia vokatra hiantohana ny fitandremam-pahasalamana avy amin'ny faritra samihafa amin'ny vatantsika, dia tsy maintsy ataontsika antoka fa ampy izany voatazona tsara mba hisorohana azy ireo tsy ho maloto. Raha ny kapoakan'ny vokatra dia tsy ilaina izany, fa mety ilainao ny mitondra azy ireo ao anaty kitapo misaraka mba hisorohana azy ireo tsy hisambotra. loto sy hamandoana.
Na dia tsy anisan'ny entana aza izy io, ny iray amin'ireo vokatra tokony ho tony kokoa rehefa mandeha dia tsara. fiantohana trano Miaraka amin'izany arovy ny fanananao amin'ny halatra mety hitranga sy ny tranga hafa mandritra ny fialan-tsasatrao. Aza hadino ny maka hevitra momba ny tolotra politika misy, ampitahao ihany koa ny vidiny sy ny fandrakofana hofidiana, noho izany, izay mifanaraka amin'ny filanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Zavatra 3 tokony horaisinao eny na eny amin'ny dia
Miasa any ivelany: iza avy ireo firenena manana hafainganam-pandeha avo indrindra?